2019 CNS ọgwụgwọ GM1 Pig Brain (37758-47-7) - APICMO
Ịmara ahụike > 2019 CNS Treatment Drug Monosialotetrahexosylganglioside Sodium (GM1) Pig Brain (37758-47-7)
06 / 05 / 2019Ihe site: APICMOCategory: Ịmara ahụike0 amasị
Chọpụta ọrụ nke GM1 na physiology neurological, ihe ndị na-eme agadi, na mmetụta dị nfe na usoro nhụjuanya na etiti.
Kedu ihe bụ Monosialotrahexosylganglioside Solidum (GM1)
Monosialotetrahexosylganglioside sodium bụ protein na-adịghị edozi ahụ bụ nke mkparịta ụka ya bụ GM1.
Gangliosides nọ na klas nke usoro ganglio, nke gụnyere glycosphingolipid na sialic acid fọdụrụ na shen sugar. Akara polysaccharide nke a zụlitere na-ejikọta ceramide site na njikọ β-glycosidic. Ọ bụghị nanị na e mere ha n'ime akpụkpọ anụ plasmic ahụ kama ọ bụkwa na reticulum endoplasmic.
Ọ bụ ezie na ha na-akwado 0.1% nke ụbụrụ zuru oke nke ụbụrụ, akaụntụ gangliosides maka ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ 10% nke n'ozuzu lipids. Ha na-eme ka ndị mmadụ ghara ichebe onwe ha, apoptosis, neuroprotection, na ntọhapụ nke neurotrophins.
Monosialotetrahexosylganglioside bụ akụkụ na-enweghị atụ nke gụnyere oligosaccharide chain and ceramide. Igwe ala ahụ gosipụtara ma hydrophilic na lipophilic Njirimara. N'ịbụ onye nwere mmiri na abụba, Monosialotetrahexosylganglioside nwere ike ịnyagharị site na mgbochi ụbụrụ ọbara.
Monosialotetrahexosylganglioside sodium GM1 na-arụ ọrụ dị omimi dị na ụbụrụ. Ọ na-egosipụta ihe ndị na-adịghị edozi ahụ dịka idozi ihe nbibi na-adịghị mma, mgbake ọrụ, na ịmaliteghachi nke eriri afọ mgbe mmerụ ahụ gasịrị. N'ihi nke a, Monosialotetrahexosylganglioside sodium bara uru na ngwọta nke mmerụ ahụ nke etiti. Ụfọdụ ọrịa ndị metụtara ya gụnyere ọrịa na-akpata cerebrospinal, mmebi ụbụrụ nke cerebrovascular, na ọrịa nhụjuanya na-akpata ọnyá. A na-etinyekwu ya na ebe enwere mmebi ahụ.
Akụkọ nke Monosialotetrahexosylganglioside Sodium (GM1)
Ihe omumu nke GM1 na oru ya neuroprotection ụbọchị laghachi na 1970s. Kemgbe ahụ, ndị ọkà mmụta sayensị achọpụtala mmasị na ụlọ ahụ site n'ịmepụta omenala ndị mmadụ na ọmụmụ anụmanụ. Ihe niile a na-elekwasị anya na-egosi na GM1 dị mkpa na ọrịa ndị na-adịghị mma.
Na 1986, site na TRB SA, a na-emepụta Monosialotetrahexosylganglioside sodium n'okpuru aha ahia, GM-1. N'iburu na ihe nchoputa nke ọmụmụ ụmụ anụmanụ na-ekwe nkwa, ndị dọkịta na-ahụ maka United States na-amalite ịchọpụta Monosialotetrahexosylganglioside sodium (GM1) n'ahụ ụmụ mmadụ. Ihe ndị a na-amụ bụ ndị nwere nsogbu CNS n'ihi mmerụ ahụ, ọnyá strok, ọrịa Parkinson, na Alzheimer.
Kemgbe ahụ, ndị dị ka Argentina na Ịtali kwadoro ọgwụgwọ ya dị ka ọgwụ ọgwụ ọgwụ maka ọgwụgwọ ọnọdụ ọrịa.
Monosialotetrahexosylganglioside Sodium(GM1)Nhazi usoro
Monosialotetrahexosylganglioside Sodium(GM1) nkọwa
CAS Mba 37758-47-7
Aha IUPAC (2S,4S,5R,6R)-5-acetamido-2-[(2S,3R,4R,5S,6R)-5-[(2S,3R,4R,5R,6R)-3-acetamido-5-hydroxy-6-(hydroxymethyl)-4-[(2R,3R,4S,5R,6R)-3,4,5-trihydroxy-6-(hydroxymethyl)oxan-2-yl]oxyoxan-2-yl]oxy-2-[(2R,3S,4R,5R,6R)-4,5-dihydroxy-6-[(E,2R,3S)-3-hydroxy-2-(icosanoylamino)icos-4-enoxyl]-2-(hydroxymethyl)oxan-3-yl]oxy-3-hydroxy-6-(hydroxymethyl)oxan-4-yl]oxy-4-hydroxy-6-[(1R,2R)-1,2,3-trihydroxypropyl]oxane-2-carboxylic acid
Klaasị ọgwụ ọjọọ Sphingolipids
Melting Point 207 - 230 Celsius C
molekụla Formula C77H139N3O31
Nkịtị Mkpụrụ 1546.841 gmol-1
· Dịkarịsịrị soluble na methanol / chloroform
Ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ nke a na-apụghị ịmịnye ya na ethanol anhydrous
ọdịdị White na-acha ọcha ọcha lyophilized ntụ ntụ
adịghị adị Ndụ Afọ abụọ
pH 5.0 ka 6.5
Synonyms GM1 na-achọpụta
Monosialotetrahexosylganglioside Sodium(GM1) Nhazi nke Action
Monosialotetrahexosyl ganglioside na-arụ ọrụ n'ọtụtụ ụzọ. Igwe ihe omuma bu ihe omuma nke otutu ihe omuma nke usoro ihe egwu.
N'ime akpụkpọ anụ ahụ nke ụbụrụ, ọrụ ndị a na-achọpụta na Monosialotetrahexosylganglioside na-echekwa nrụrụ ion ahụ n'ime na n'èzí anụ ahụ. Ọ bụghị naanị na ọ na - eme ka ahụ ghara ịdị elu, kama ọ na - egosikwa sodium na calcium ions.
N'ihe metụtara nhụjuanya akwara, Monosialotetrahexosylganglioside sodium (GM1) na-abata na iji chebe usoro ahụ. Ọ na-eme ka ọrụ nke phospholipase A2 na-arụ ọrụ, na-eme ka ọnyá calcium na-emetụta ya, ma na-ebelata nhazi nke free radicals.
Brain traumas na-eme ka ọrụ protein protein na-apụtawanye na mkpụrụ ndụ, nke nwere ike ibu ọrụ maka apoptosis. GM1 na-egbochi ma gbanwee usoro a site na ijide metabolism nke ndị na-edozi n'ime cytoplasm na nucleus.
N'ime mitochondrion, Monosialotetrahexosylganglioside na-arụ ọrụ iji dozie mmepụta nke ATP na ọrụ synthase ya. Ọ na-arụzi mmebi ọhụụ na nkedo ígwè ọrụ electron ma meziwanye phosphorylation oxidative. N'ihi ya, ọrụ ụbụrụ nke ụbụrụ na-anọgide na-adịgide adịgide.
Mkpụrụ ogwu nke sodium na-eme ka axonal pulite site na itinye uche n'ihe ndị na-eto eto na ndị ha nabatara. Ọrụ a na-emepụta ihe na-eme ka akwara na-arụ ọrụ ma na-akwalite mgbake ngwa ngwa. N'ihe banyere degeneration nke abụọ, ma eleghị anya n'ihi dopamine neuron mmebi, Monosialotetrahexosylganglioside ga-eme ka ahụ dịkwuo elu ma mee ka ndụ ndị a dịgide.
Monosialotrahexosylganglioside Solidum (GM1) Mmetụta
Ọ bụ ezie na ndị na-eme ka ndị na-eme ihe ike bụ ndị kasị nta na ụbụrụ, ọrụ ha dị nnọọ ukwuu. Mkpụrụ ndụ ndị a nwere mmetụ dị mma na uto, nchịkwa, idozi, na nchebe nke eriri akwara.
GM1 adabere na afọ. A na-ejikọta onye na-eto eto na iji ụbụrụ, ụbụrụ ọkụ, ihe nhụjuanya mberede, ma ọ bụ ihe mgbochi ncheta. E wezụga nke ahụ, ọrịa ndị mere agadi na-arịa ọrịa ụbụrụ, ọrịa strok, na nkwarụ nwere ike ịdaba.
Mgbakwunye oge nke GM1 dị egwu na-enyere aka na-achịkwa ọtụtụ ọrịa syndikes. Ụfọdụ n'ime ihe ndị dị mma bụ Monosialotetrahexosylganglioside sodium (GM1) gụnyere gụnyere ọgwụgwọ ọrịa Alzheimer, ọrịa strok, epilepsy, na ọrịa ụbụrụ. E wezụga nke ahụ, mgbakwunye ahụ na-ebelata ịka nká site meziwanye ebe nchekwa.
Ojiji nke GM1 na ngwa nyocha bụ ihe sara mbara. Dịka ọmụmaatụ, ọtụtụ mba Europe na Amerịka na-ewere ọgwụ mgbochi sodium monosialotetrahexosylganglioside iji jikwa ọrịa CNS.
Ihe mgbakwunye ahụ na-eme ka ụbụrụ akwara, mmepe nke ụbụrụ, na igbochi nsogbu ọrịa na-adịghị. N'iji ọgwụgwọ, ngwongwo a na-eme ka ụbụrụ ụbụrụ na-arịa ọrịa, mmerụ anụ ahụ, ọnyá ụbụrụ, na ọnyá na-akpata ọnyá.
Ihe kachasị mkpa na ọmụmụ ihe na ntinye nke onyinye a na ụmụ mmadụ na-achọpụtakwa na ọ dịghị ihe ọ bụla na-akpata Monosialotetrahexosyl ganglioside sodium (GM1).
Mmekọrịta GM1 abụghị nkọwa nkịtị. Na 1976, Ceccarelli guzobere na ndị na-emepụta ihe dị iche iche na-eme ka nchịkwa na akụrụngwa na-arụ ọrụ na mmezi nke sel ndị mebiri emebi. Nchọpụta a mere ntọala siri ike maka ndị ọkà mmụta bụ ndị gosipụtara mmasị n'ịmụ ọrụ GM1 na usoro nhụjuanya nke etiti.
Otutu nke ule na-egosi na Monosialotetrahexosylganglioside nwere mmetụta dị mma banyere uto, iche iche, mmepe, na ntinyeghachi nke mkpụrụ ndụ na-adịghị ahụ. Ọzọkwa, nnyocha nyochaa arụmọrụ nke GM1 na neuroprotection, neuroplasticity, na iziga synaptic.
N'ihe banyere trauma, ịnweta ọgwụ mgbochi sodium Monosialotetrahexosylganglioside ga-emetụta usoro ahụ ụjọ na ọtụtụ ụzọ. Igwe ahụ ga - eme ka ọ ghara ịmalite ọgbọ dendritic nke mkpụrụ ndụ akwara kamakwa ọ na - eme ka ọnụọgụ ndụ ha. Nke abuo, mgbakwunye ahụ nwere ọrụ dị mkpa n'ịmezi, nchịkwa, na mgbake ọrụ.
Monosialotrahexosyl Ganglioside Solidum (GM1) Wepụ Usoro
Ka ọ dị ugbu a, Monosialotetrahexosyl ganglioside bụ naanị CNS ọgwụgwọ nke na-emekarị-eme.
Ngwurugwu ahụ bụ akụkụ nke ganglioside, nke a na-emepụta nke ọma na akpụkpọ anụ ahụ nke anụ mammal. N'ihi ọdịnaya ya dị na anụ ahụ na-atụ ụjọ, ndị ọkà mmụta sayensị na ndị dọkịta enwewo ike wepụ ma jiri ya na-akwadebe ọgwụ ngwongwo ọgwụ na monosialotetrahexose ọgwụ.
Anyị na-ewepu mkpụrụ ndụ ndị na-ahụ maka anụ mamịrị Monosialotetrahexosyl ganglioside. Ọ bụ ezie na ị nwere ike ịtọpụ mkpụrụ osisi ahụ site na ehi ma ọ bụ ewu, usoro kachasị nchebe bụ ụbụrụ ụbụrụ wepụ. Ihe kpatara ya bụ na mkpụrụ ndụ ehi ma ọ bụ ewu ga-esi na Monosialotetrahexosyl ganglioside na-ewepụta ihe dịka ọrịa na-egbu egbu na epilepsy.
A na-enweta ngwa ngwa maka ihe ntanetịpụtara maka Monosialotetrahexosylganglioside sodium (GM1). Anyị na-enye gị GM1 kasị dịrị nchebe ma dị ọcha site na nkwonkwo ezi, dịka usoro ahụ adịghị ebute ụmụ mmadụ ọrịa.
Maka mkpụrụ dị elu, anyị na-etinye usoro ntinye mmiri methanol-water chloroform-methanol. Mgbe nke a gasị, anyị na-eme mgbanwe dị iche iche na-ewepụsị nke chromatographic. Nchacha nke a na-eweta homogene molecule, nke bụ> 98% dị ọcha site na HPLC.
Mmetụta ndị na-emepụta ihe dị iche iche nke Monosialotetrahexosyl dị ịrịba ama na ngwa ngwa. Ọ bụ ọgwụ ọgwụ akwadoro maka ịchịkwa nsogbu ọrịa na-agwọ ọrịa na ọgwụgwọ nke mmerụ ahụ bụ isi.
Ma ị chọrọ ịzụta GM1 maka ọgwụgwọ ọgwụgwọ ma ọ bụ nzube nyocha, anyị na-ekwe nkwa na ị bụ ngwaahịa dị elu. Anyị na-ebuli elu Monosialotetrahexosylganglioside sodium (GM1) ntụ ntụ n'okpuru ụkpụrụ njikwa akara mma.
Schneider, JS, Roeltgen, DP, et al. (1998). Ọrịa Parkinson: Ọrụ Kwalitere Na GM1 Ganglioside Treatment na Nyocha a Na-echekwa Ebe Mmiri.
Bansal, AS, Abdul-Karim, B., Malik, RA, et al. (1994). Igwe IgM Igwe Igwe GM1 na Patient with Disease Autoimmune or Neuropathy, na Njikwa. Journal Clinical Pathology.
Mocchetti, I. (2005). Okpomoku ndi mmadu di iche iche, Neuronal Plasticity and Repair, na Neurotrophins.
Aureli, M., Mauri, L., Ciampa, MG, Prinetti, A., Toffano, G., et al. (2016). Gangelị GM1: Ọdịnihu gara aga na Ọdịnihu. Neurobiology nke ogwu.
Bian, L., Yang, J., na Sun, Y. (2015). Ịdọrọ na Ịdị ọcha nke Monosialotetrahexosylgangliosides si na Pig Brain site na mmịpụta na Liquid Chromatography.
Previous Previous post: Ihe Niile I Kwesịrị Ịma Banyere Pyridines